FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SCHWEENIE - ALIKA
Alika mifangaro Dachshund / Shih Tzu mifangaro
'Tanner dia fifangaroan'ny Dachshund / Shih Tzu ary manodidina ny 10 volana amin'ity sary ity. Izy no manana ny toetra mahafinaritra indrindra ary mahafaly ny miaraka. Tiany daholo ny olona mihaona aminy ary tsy mikorontana mihitsy. Mampihomehy izy ary milalao fa te-hihorakoraka eo akaikiko ihany koa. Matetika izy manome ahy fitia noho ny vadiko. Zanako izy. Milalao tsara amin'ny alikanay iray hafa koa izy. Ny olana momba ny fitondran-tena ihany no izy fanofanana an-trano SY fanahiana fisarahana . Izay mety ny hadisoako mihoatra noho ny azy . '
Tsy alika madio ny Schweenie. Lakroa misy eo anelanelan'ny Dachshund ary ny Shih Tzu . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'I Sam dia toy ny alika kely 10 herinandro. Schweenie izy ary vatosoa tanteraka !! Nahazo dera avy amin'ny olona rehetra izy satria toa tsy dia mahazatra loatra amin'ny tongony fohy, vatana malemy ary sofina midorehitra. '
'Sahabo ho 75% amin'ny toeram-pivoahana any an-toerana izy no nofanina ary nianatra tsy nitomany fa matory mandritra ny alina. Tena mavitrika izy ary tia ny saina ie-lalao, kodiarana ary ny vavony !! Faly be aho fa vetivety dia nandray baiko kely toy ny fipetrahana, fijanonana ary ny paw. '
'Ity i Oscar ary 9 volana izy. Milanja eo ho eo amin'ny 10 lbs izy. Hatramin'ny volana novambra ka heveriko fa lehibe noho izy hahazo! '
'Ny dadany no Dachshund ary ny reniny no Shih Tzu . Izy manana ny tarehy mahafinaritra indrindra mamela azy hiala amin'ny be loatra!
'Be fitiavana izy ary tia mifampikasoka, nefa afaka mahaleo tena koa izy, ary indraindray te hanao ny azy ihany! Tiany ny milalao miaraka amin'ny Beagle sy Dachshund ahy ary mifanaova izy ireo. Tazoko foana izy mandritra ny andro rehefa tsy ao an-trano aho satria tiany ny mitsako zavatra! Nanandrana nametraka vavahady zazakely aho, saingy nihanika azy io!
' Fanofanana crate nanjary mora kokoa, saingy mbola manana fitaintainanana misaraka ihany izy. Tamin'ny voalohany dia nitomany tsy nijanona izy (araka ny filazan'ny mpifanila vodirindrina amiko), fa izao izy vao mitomany rehefa henony ny vadiko sy izaho ao anatiny raha tsy avelantsika hivoaka eo noho eo izy.
' Fanofanana poti tena raharaha rahateo tamin'ny voalohany, fa izao kosa pro. Efa telo volana izy tamin'izaho naka azy ary tsy marina ny eritreritro fa nitondra azy tany ivelany ny mpiompy azy satria natahotra ny ho faty tany ivelany izy nandritra ny telo herinandro voalohany nanaovanay azy.
'Tena manan-tsaina izy ary mianatra haingana be. aho nampianatra azy hipetraka ao anatin'ny roapolo minitra, saingy heveriko fa ny alika roa hafa dia nanampy tamin'ny fampisehoana taminy ny fomba nahazoan'izy ireo ny fitsaboana azony tamin'ny fipetrahana. Tiany ny mihinana ary nandondona ny loviany teny an-tanako izy talohan'ny nametrahako azy. Rehefa afaka 2 alina monja ny tena niarahako niasa taminy dia azoko apetraka eo alohany izao ilay lovia ary tsy hihinan-kanina izy mandra-pilazako azy.
'Matetika izy no saro-kenatra sy saro-kenatra eny ivelany rehefa mifanena amin'ny olona, ​​fa raha avelantsika hisy olona ao an-trano dia sariaka sy sariaka amin'izy ireo izy. Tiany ny mandeha an-tongotra , saingy tsy maintsy jerentsika izy satria tiany ny maka zavatra tsy kisendrasendra ary mitondra izany. '
'Ny volony dia mitombo haingana kokoa noho izany, matetika dia entintsika any amin'ilay mpitaiza indray mandeha isam-bolana na roa fotsiny izy mba hikarakarana ny tongony sy ny fehiloha kely. Raha tsy tazomintsika izy, dia manakaiky ravina saika isaky ny mivoaka. Na dia lava aza, dia somary mikorontana ny volony ary isaky ny roa herinandro eo ho eo aho no mila miborosy. Mahafinaritra izy amin'ny mpitaiza ary nilaza izy fa mipetraka fotsiny izy ary mamela azy hiasa aminy tsy misy ady. Rehefa ampandrointsika izy ao an-trano dia manao zavatra mitovy ihany izy, mipetraka eo miandry ny fahataperan'io.
'Tena mahatalanjona anay mivady ny manana azy amin'ny fiainanay. Izy dia mitondra fifaliana be dia be ho antsika amin'ny fihetsiketsehana mahafinaritra sy ny zava-dratsy nataony! '
Julius the Schantaraie amin'ny 4 taona- Novidina ho zanak'alika i Julius. Ny reniny dia Shih Tzu ary ny dadany dia Dachshund. Nihevitra izahay fa ho mpiara-miasa tsara ho an'i Shih Tzu, antsoina hoe Ceaser, izy. Alika mpiambina miavaka izy, zazalahy kely mahafinaritra an'i Mommie. '
Julius the Schantaraie (Dachshund / Shih Tzu mix type) amin'ny 4 taona
'Ity i Ace! 1 1/2 taona izy. Mahafinaritra sy mamy tokoa izy. Izy no alika mamy indrindra hatrizay! izy manao fanazaran-tena isan'andro amin'ny fandehanana an-tongotra sy amin'ny fihazakazahana . Miforitra aminao izy isaky ny tianao izany. Alika mahay mandanjalanja izy ary misakafo tsara. Tsy milatsaka izy, ary rivotra ny fiofanana an-trano! Izy dia mpiambina, azo antoka izany. Tianay kely i Ace kely! '
Baxter the Schantaraie tamin'ny faha-3 volana - Dachshund mini ny reniny ary Shih Tzu ny rainy.
'Schweenie vavy amin'ny 6 herinandro antsoina hoe Lucy (LuLu) ity. Ny reniny dia Shih Tzu ary ny rainy dia Dachshund kely. Hatreto dia alika tsara fitondran-tena i LuLu. Tsy tiany ny mikorontana ao an-trano ary hiandry mandra-pitondrako azy mivoaka. Avy hatrany dia mandeha vilany izy ary mahazo fitsaboana. Tena tia milalao izy, maneso ireo biby hafa, ary mahafinaritra miaraka amin'ny zafikeliko. Haingana izy nahafantatra fa tsy mahay manaikitra. Izy koa dia efa nianatra nijanona tao anaty sambo fiara nefa tsy nitomany, fa tsy apetrako ao izy raha tsy efa vonona hatory kely. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Schantaraie
Sary anelanelan'ny sary 1
husky afangaro pitbull
afangaro amerikana bulldog sy beagle
alahady malamute x mpiandry ondry alemanina
fangaro amin'ny fary sy pitbull
mini merle aostraliana mpiandry ondry mini